Ala laminate na -ere maka agba parquet Onye na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya Moyo
Nha: 806X403mm, 1214x296mm
Ọkpụrụkpụ: 10mm 10.5mm 12mm
LAla ala aminate (nke a na-akpọkwa taịl osisi na-ese n'elu mmiri na United States) bụ ngwaahịa nwere ọtụtụ ihe eji eme ụlọ nke ejikọtara ọnụ yana usoro mkpuchi. Ala a na -etecha edocha na -eme ka osisi (ma ọ bụ mgbe ụfọdụ okwute) nwee foto dị mma n'okpuru akwa nchekwa doro anya. N'ime ime oyi akwa a na -abụkarị melamine resin na fiber board ihe. Enwere ụkpụrụ ọkọlọtọ mba Europe EN 13329: 2000 na -akọwapụta ihe mkpuchi mkpuchi ala na ụzọ nnwale.
Ntọala ụlọ laminate etoola nke ukwuu na ewu ewu, ikekwe n'ihi na ọ nwere ike ịdị mfe ịwụnye na idobe karịa ebe ọdịnala ndị ọzọ dị ka ala osisi siri ike. Ọ na -adịte aka, ịdị ọcha (ọtụtụ ụdị nwere resim antimicrobial), ọ dịkwa mfe idobe ya.
Ala dị larịị dị mfe maka onye nwe ụlọ DIY ịwụnye. A na -akwakọba ala ụlọ dị larịị dị ka ọnụ ọgụgụ ire na oghere, nke enwere ike ịpịkọta ibe ha. Mgbe ụfọdụ a na -enye nkwado gluu maka ịdị mfe nrụnye. Ala laminate arụnyere na-esekarị 'n'elu mmiri' n'elu okpuru ala nke dị n'okpuru mkpuchi ụfụfụ/ihe nkiri, nke na-enye mmiri na ihe na-ebelata ụda. A chọrọ obere oghere (1-10 millimeters (0.039-0.394 na)) n'etiti ala ụlọ na ihe ọ bụla na -adịghị agagharị dị ka mgbidi, nke a na -enye ohere ka ala gbasaa na -enweghị ihe mgbochi. Enwere ike wepu bọọdụ mbadamba (bọdụ mbadamba) wee tinyeghachi ya ọzọ mgbe ịtọsịrị ala ụlọ zuru oke maka imecha nke ọma, ma ọ bụ enwere ike idobe bọọdụ ala ebe a na -etinye ala n'ime ya, mgbe ahụ obere mkpụkọ beads dị ka ịkpụ akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ nkeji iri na ise. -nke ịkpụzi nwere ike dabara na okpuru ala baseboards. A na -achọkarị mbepu osisi na mbadamba na nsọtụ na gburugburu kọbọd na ọnụ ụzọ, mana ndị nrụnye ọkachamara na -ejikarị osisi jamb n'okpuru ụzọ ịwa oghere dị elu nke na -enye ohere ka ala banye n'okpuru jamb & mkpuchi maka ịdị ọcha. .
Ntinye na -ezighi ezi nwere ike ibute ọnụ elu, nke mbadamba dị n'akụkụ na -etolite ụdị V na -esepụta site na ala, ma ọ bụ oghere, ebe a na -ekewa bọọdụ abụọ dị n'akụkụ ibe ha.
Ọ dị mkpa idobe laminate ọcha, n'ihi na uzuzu, unyi, na ájá nwere ike ịchacha elu oge oge na mpaghara okporo ụzọ. Ọ dịkwa mkpa idobe laminate ka ọ kpọnwụọ, ebe ọ bụ na ịnọdụ ala mmiri/iru mmiri nwere ike ime ka plank ahụ zaa, gbasaa, wdg, n'agbanyeghị na ụfọdụ ụdị nwere mkpuchi mkpuchi mmiri. Mgbafu mmiri abụghị nsogbu ma ọ bụrụ na ehichapụ ha ngwa ngwa, ekweghị ka ha nọrọ ọdụ ogologo oge.
A na -etinyekarị mpe mpe mpe akwa n'ụkwụ arịa ụlọ n'elu ala laminate iji gbochie ncha.
Ala ala laminate na -adịchaghị mma nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ kewaa, na -ekepụta oghere n'etiti oghere. Ọ dị mkpa 'ịpịghachi' osisi ndị ahụ ọnụ site n'iji ngwa kwesịrị ekwesị n'ihi na a na -ahụ oghere iji gbochie unyi na -ejupụta oghere ndị ahụ, si otú a na -eme ka o sie ike itinye ya.
Ala dị larịị na -enweghị gluu na -eji usoro njikọta nke na -ejikọ ogwe osisi n'okpuru nsogbu mgbe niile nke na -egbochi unyi na -abanye na nkwonkwo ma ọ dịghị mkpa 'ịpị' ọnụ ọnụ oge.
Nke gara aga: Ecomomic laminate floor EIR Series
Osote: Laminate Floor Maka N'ogbe na usoro nkịtị